Somaliland oo si kulul uga Jawaabtay hadal kasoo yeeray Puntland | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Somaliland oo si kulul uga Jawaabtay hadal kasoo yeeray Puntland
Somaliland oo si kulul uga Jawaabtay hadal kasoo yeeray Puntland
Somaliland ayaa si kulul uga jawaabtay hadal dhawaan kasoo yeeray Maamul Goboleedka Puntland kaasi oo ahaa go’aan ku saabsanaa imtixaanka Sanaag.
Qoraal kasoo baxay Wasdaaradda Waxbarashada Somaliland ayaa waxaa lagu sheegay qoraalkaas in go’aanka Puntland uu yahay hadal xagjirnimo ah oo aan sharciyad ku dhisneyn, waxaana Somaliland ay intaa ku dartay in habayaratee go’aankaasi uusan wax saameyn ah ku yeelan karin howlaha qaadista Imtixanaadka shahaadiga ah ee ardayda Somaliland.
Akhriso qoraalka Wasaaradda.
“Wasaaradda Waxbarashada Jamhuuriyada Somaliland waxay u xilsaarantahay in bulshada aqoontooda iyo garaadkooda la kobciyo si horumar waara loo gaadho. 25kii sanadood ee u danbeeyey imitxaanaadka shahaadiga ah waxaa si habsami ah looga qaadayey dhamaan ardayda wax ku barata gobolada iyo degmooyinka dalka.
Waxaan baraha bulshada ku aragnay warqada sumadeedu tahay W/W/W/TS/211/2021, kana soo baxday maamul goboleedka Puntland ee dalka aanu jaarka nahay ee Soomaaliya, nuxurkeeduna yahay khalkhal galinta goobaha Imtixaanaadka shahaadiga ah ee qaybo ka tirsan dalka JSL.
Wasaarada Waxbarashada JSL waxay u aragtaa qoraalkaas hadal xagjirnimo ah oo aan sharciyad ku dhisneyn, oo habayaratee aan wax saameyn ah ku yeelan karin howlaha qaadista Imtixanaadka shahaadiga ah ee ardayda JSL.
Waxaanu maamulka Gobolka Badhan la socodsiinaynaa inay indho dhow iyo feejignaan u yeeshaan hadalkaa xagjirnimada ah, si aan waalidiinta iyo ardayda loo gelin dareen aan jirin.
Ugu danbayn Wasaaradda Waxbarashada JSL waxay uga digaysaa cidkastoo isku dayda ama ku fikirta khalkhal gelinta habsami u socodka imtixaanaadka qaranka”.
Maqaal horeHoggaamiyeyaasha Caalamka oo isugu tagaya Ingiriiska iyo u jeedka
Maqaal XigaHirshabeelle iyo KGS oo bedelay xubnihii la soo eedeeyay ee ku jiray Guddigii doorashada